Iqhutywa luphuhliso loqoqosho lwehlabathi kunye neemfuno zentengiso, ishishini lemithwalo yelizwe lam likhule ngokukhawuleza kule minyaka ilishumi idlulileyo, kwaye ukwanda kwebango lemarike kuzise iinkampani ezininzi zemithwalo kwindlela yophuhliso olukhawulezileyo. Ngokwembonakalo yemodeli yeshishini, i-lug yasekhaya
Abathengi abaninzi abafuna iifektri zebhegi banethemba lokufumana iikowuteshini ezichanekileyo ngokukhawuleza kwiibhegi zabo ezenziwe ngokwesiko. Nangona kunjalo, ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, kunzima kubavelisi ukuba bakunike ikowuteshini echanekileyo ngaphandle kweenkcukacha zesampulu okanye zebhegi. Ngapha koko, kukho indlela yokufumana ...
Ndiyakholelwa ukuba wonke umntu uza kudibana nengxaki yobuninzi be-odolo xa ufuna abavelisi ukuba benze ngokwezifiso iibhegi zobhaka. Kutheni umzi-mveliso ngamnye unemfuneko ye-MOQ, kwaye yintoni ubungakanani obuncinci be-odolo obuncinci kwimizi-mveliso yokwenza ulwenziwo? Ubuncinci be-odolo yobungakanani bokugcinwa ...
Qonda inkqubo yokuvelisa ubhaka ngomzuzu
Ukuthetha ngenkqubo yokuveliswa koobhaka, abantu abaninzi banokucinga ukuba inkqubo yokuvelisa ubhaka kunye neempahla ziyafana, emva kwayo yonke loo nto, oomatshini bokuthunga basetyenziselwa zombini. Ngapha koko, olu luvo alulunganga. Kukho umahluko omkhulu phakathi kwenkqubo yobhaka kunye neempahla. Ngokubambisana ...
Elungiselelweyo LOGO wobugcisa ubhaka
Indlela yokuprinta ye-LOGO kulwenziwo lobhaka yingxaki ekuqubiswana nayo. Ukomeleza inkcubeko yokudibanisa kunye nokuqaqambisa umfanekiso wequmrhu, ushicilelo lwe-LOGO lubaluleke kakhulu. Ngokukodwa, uyilo lweenkampani ezithile luyinkimbinkimbi kwaye kufuneka luphunyezwe ...